Ondana "papaya" miloko volontany - Moy Mili
Ny poketranao dia foana
Manampia naoty ho an'ny mpivarotra ...
sandan'ny carteum total
Mametraka ny baikoo
Teepee miaraka amin'ny pompoms
Teepee miaraka amina garland
Teepee miaraka amin'ny frills
Teepee napetraka miaraka amin'ny tsihy
Boribory boribory boribory
Fenoy voajanahary ho an'ny ondana
voninkazo natao fihaingoana
Set of magic
Lamba sy satroka
Fa ny boribory
Home > Ondana ny ondana ny "papaya"
Ondana ny ondana ny "papaya"
Ny bokin-doko vita amin'ny rongony vita amin'ny lamba tany Mua Mili no soso-kevitray handravaka ny efitranon'ny ankizy. Izy ireo dia mety ho fanampin'ny tranolainay na ny ravaka amin'ny farafara na seza seza. Mampirisika anao izahay hamorona andiana ondana maromaro.
Ny ondana dia namboarina matevina ary voakapa avy amin'ny rongony kalitao tsara tarehy. Ny lamba mareva-doko dia hampifalifaly ny kotrik'ninao, fa ho tsara tarehy io amin'ny efitrano fandraisam-bahiny. Mampirisika anao izahay hamorona famoronana cushion avy amin'ny endrika misy.
Ao anatiny dia feno ny ondana ondana avo-be anti-allergic silicone baolina. Afaka fehezina milamina tsara amin'ny masinina fanasana, tsy mamoy ny fluffiness sy ny elastika ny fametrahana.
Lamba: 100% Lamba sy 100% Cana miaraka amin'ny fanamarinana OEKO-TEX®.
Refy: 47 cm x 42 cm.
Suhu fanasana: hatramin'ny 30 ° C.
Ny vokatra Moi Mili dia fanao tany am-boalohany novolavolainay, izay aseho amin'ny tahan'ireo avo indrindra sy ny kalitaon'ny asa. Samy noforonina tany Polonina avokoa izy ireo. Ny vokatra hafa mitovy habe amin'ny Internet matetika dia tsy mahafeno ny fepetra momba ny kalitao.
Default Title - PLN 99.00 PLN
Omeo antso izahay
Ampiasao ity popup ity hametahana lisitra fisoratana anarana. Manome famporisihana ny mpanjifa hanatevin-daharana sy hanangana lisitra mailakao.
Misaotra an'i Joining!